Qoorqoor “Doorasho waxaan ahayn oo dalkan ka shaqeynaya ma jiraan” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Qoorqoor “Doorasho waxaan ahayn oo dalkan ka shaqeynaya ma jiraan”
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya inay Dowladda Federaalka ku hawlan tahay muddo kororsi.
Madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay in dalka uu jooggo xilli doorasho, isla-markaana aanay jirin baahi maanta loo qabo muddo kordhin, isagoo intaa ku daray inuu ku kalsoon yahay in dalka uu doorasho aadi doono.
“Wadanka xilli doorasho ayuu jooggaa oo muddo xileedkii dhammaaday, mana qabo sax-na maaha muddo kordhin inuu dhaco, hadda baahi loo qabo ama maanta Soomaali inay wax u tareysana ma aaminsani, muddo kororsi wax la yiraahdo iyo muddo kordhin inay sax tahay. Doorashaa dalku geliyaa, waan ku kalsoonahay, waana qabaa in dalku doorasho gelaayo.” Ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug oo la hadlay Somali Cabletv.
Madaxweynaha ayaa sheegay inay jiraan dad caqabad ku ah hannaanka geedi-socodka ee doorashooyinka, waxaana uu ugu baaqay inay ka waan-towbaan.
“Dad uun baa si’ wax ku raaci doonaan oo eedo ku raaci doonaan oo ka qaadi doona wax kastoo aad is tiraahdo farsamey iyo qurxi, dadkan Soomaaliyeed waxba uma qarsoona, waa lees ogyahay. Marka cid kasta oo qodax ku ah arrimaha doorashada waxaan u rajeyneynaa inay ka waan-towdo oo leeska daayo.” Ayuu yiri Madaxweyne Qoorqoor.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa ku celiyay in dalku doorasho aadi doono, iyadoo uu xusay inaanu aaminsanayn muddo kordhin, wararka sheegaya in dowladdo muddo kordhin samayn doontana ay war suuqeed uun yihiin.
“Dalku doorashuu aadayaa, doorasho waxaan ahayn oo dalkan ka shaqeynayana ma jiraan, muddo kororsina ma aaminsani. Aniguna war suuqa iyo fadhi ku dirirka wax kuma dhiso, waxaasna wax laguma qaato, laakiin anigu waxay tahay aragtideedu oo aanan weliba dhexda dhigeynin wadankan doorashuu aadayaa.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo xoogeysanayay warar sheegaya in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xusul-duub ugu jiro muddo kordhin.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa ka mid ah Madaxda Dowlad Goboleedyada, ee wadashaqaynta dhow la leh Villa Somalia.
Previous articleCabdiraxmaan Cabdishakuur “Tareenkii Farmaajo wuxuu soo gaaray boosteejadii muddo kororsiga”
Next articleFarriinta Madaxweyne Farmaajo ee Ciidanka Xoogga Dalka